Taliyaha cusub ee qaybta Booliska gobolka Nugaal oo xilkii kala wareegay taliyihii hore – Radio Daljir
Seteembar 21, 2015 7:05 b 0
Isniin, September 21, 2015 (Daljir) —Taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir ayaa maanta xilkii kala wareegey talihii hore ee ciidamada booliska qaybta gobolka Nugaal Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Samatar (Layli) oo mudo xilka soo hayey.
Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka qaybgalay taliyaha guud ee ciidamada booliska dowladda Puntland, gudoomiyaha gobolka Nugaal, saraakiil katirsan ciidamada ammaanka ee dowladda Puntland iyo marti sharaf kale.
General Cabdirisaaq Afgaduud taliyaha guud ee ciidamda booliska dowladda Puntland oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in taliyihii hore ee qaybtu uu waxbadan qabtay, haatana loo bedeley kulliyadda tababarka ciidamda booliska ee degmada Carmo.
Corneal Cumar Cabdullaahi Faraweyne gudoomiyaha cusub ee gobolka Nugaal ayaa soodhoweeyey taliyaha cusub ee qaybta, wuxuuna sheegay inay ka maamul gobol ahaan taliyaha kala shaqayn doonaan sidii uu shaqadiisa ugudan lahaa.
Ugu dambayntiina taliyaha cusub ee qaybta gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir ayaa sheegay inuu shaqadii ciidamda booliska gobolka Nugaal halkeedii kasii wadi doono, wuxuuna ka codsaday shacabka gobolka Nugaal inay lashaqeeyaan.